ယနေ့ ညနေ (၅) နာရီအချိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အ… – PVTV Myanmar
· 8 months ago ·39 Comments
ယနေ့ ညနေ (၅) နာရီအချိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အမှတ် (၁/၂၀၂၁) ကို စတင်ကျင်းပသည့်အချိန်မှစ၍ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Like – 47K Share – 9033
Mya Mya Chit says:
2021-06-04 at 4:15 PM
We support NUG and Hope to hear miracles.
Min Heim Kyaw says:
Kin Thu Zar Moe says:
2021-06-04 at 4:22 PM
ကျမတို့ ချစ် တဲ့ပြည်သူအစိုးရ
NUG အစိုးရသစ်အား လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
2021-06-04 at 4:40 PM
Kyaw Htwe says:
2021-06-04 at 4:42 PM
အစိုးရသစ် NUG အား လိူက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏
Sai Zaw Tin Violin says:
2021-06-04 at 4:46 PM
2021-06-04 at 4:52 PM
Ko Aungmoe says:
2021-06-04 at 4:54 PM
မေးပေးပါဗျာ တစ်ဖက်က NUG ကို online အစိုးရဆိုတော့ online ပေါ်မှာပဲ လေကြီးနေတာ တကယ်ကျ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ဘာမှမတက်ပါဘူး အရေးတော်ပုံမအောင်ဘူးနဲ့ လှောင်နေကြတယ် သူတို့ကို ဘယ်အချိန်လောက်မှာ သက်သေပြနိုင်မှာလဲ ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကတော့ NUG ကို ယုံကြည်မြဲ ယုံကြည်လျှက်ပါဗျာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် တက်နိုင်သလောက် ကူညီဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်
Nitar Kyaw says:
2021-06-04 at 4:57 PM
Wayadi Cho says:
2021-06-04 at 5:00 PM
Hninn Nu Nu says:
လေးစားစွာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုအပ်ပါတယ်
Bhone Zaw Myint says:
အစိုးရသစ် NUG ကို ကြိုဆိုပါသည်။
2021-06-04 at 5:07 PM
၅ နာရီကျော် ပြီ မလာသေးဘူးလားရှင့်
NUG အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အစိုးရအား လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏
2021-06-04 at 5:30 PM
Mg Phar says:
2021-06-04 at 6:00 PM
Than-Tun Sein says:
Internet ဖြတ်လိုက် ပြီ။
Aye Soe Maw says:
Phyo Khant says:
Yan Myo says:
ျက္ုိဆိုပါတယ္ ဟို မအလက လိုင္းျဖတ္လိုက္လို့ ဆဲခ်င္လို့ ေစာင့္ေနရတယ္
Toetet Shan says:
Aye Thandar Phyoe says:
မအလတွေ ကြောက်လို့ လိုင်းတောင်ဖျက်ပစ်ရတယ်ဆိုတော့
NUG အစိုးရသစ်ကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏
မောင်ကြီး မောင်ကြီး says:
Win Thant Zaw says:
မြန်မာပြည်သူများ ၏ တရားဝင် အစိုးရ အား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
Sandar Minnkhant says:
Respect u all!
go straight on*****
Phoe Tin Win says:
ျပည္သူပုိင္ ႏိုင္ငံကုိ ကုိယ္ပုိင္လို အပိုင္စီး၊ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလည္း ျပန္ေပးဆြဲသလုိ ဖမ္းထား။ျပည္သူေတြကုိလည္း သူတို႔ ေမြးထားတဲ့ ျခံထဲက တိရစၦာန္လို သေဘာထား သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ စကစ။
NUG သတင္းစား႐ွင္းလင္းပြဲ႐ွိလို႔ သက္သက္ကို အင္တာနက္ေတြ ပိတ္တယ္။ယုတ္မာခ်က္ ကမ္းကုန္။
ဘယ္အရာမွ သူတို႔ပုိင္ မဟုတ္။ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ ဝယ္ထားတဲ့ ဥစၥာေတြ။
လုပ္ရပ္ေတြက ေအာက္တန္းစား ဆန္လြန္းတယ္ေနာ္ မအလ တို႔။
ညနေ ၅ နာရီမထိုးခင်အင်တာနက်ဝိုင်ဖိုင်ဖြတ်တောက်လို့ပါလူညစ်စကေး
Aye Kywe says:
2021-06-04 at 6:20 PM
NUG အစိုးရ လာမှ
ဆန္ဒပြည့်ဝ ဘဝ လှမည်
Thar Tun Aung says:
2021-06-04 at 6:45 PM
Kywe Kywe says:
2021-06-04 at 6:49 PM
Smk Kyaw says:
NUG အစိုးရကိုထောက်ခံပါတယ်(ကြိုဆိုပါတယ်) အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
KKhin Swe says:
2021-06-04 at 7:14 PM